Ny nampianarin’ny GV ny Tanavo iray (izaho) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2019 12:11 GMT
Aty Bandung (Indonezia), toerana niaviako aho no manoratra ity lahatsoratra ity amin'izao fotoana izao. Ny Ramadany no mahatonga ahy ho aty, efa fombandrazana aty amin'ny fireneko ny fodian'ny olona any an-tanindrazany na mandeha mihaona amin'ny havan-tiany rehefa tonga io vanimpotoana io. Ny sary etsy ambony dia mampiseho ny latabatra be korontana saingy kanto fampiasako hanoratana ny zavatra rehetra — ny asa entimody, ny fanohanana famaranana ny fianarana ambony, ny bilaogy, sy ireo fitaovam-piasako rehetra, sns — ary tiako ity toerana ity, tahaka ny itiavako ihany koa ny solosaina findaiko.
Enimbolana eo ho eo izay, nahita ity tranonkala fanaovana gazetin'olontsotra ity aho, antsoina hoe Global Voices. Manampy ahy hahita zavatra mahaliana, mendrika ho vakiana ny GV. Tsy nihambahamba aho nanapaka hevitra ny hanatevina laharana tao ho toy ny mpandika lahatsoratra. Ny tena nandrisika ahy tamin'izany fotoana izany dia ny hanatsara ny fahaizako teny anglisy amin'ny famakiana sy fandikàna ny lahatsoratr'ireo hafa mpandray anjara ao. Saingy, toy ireo olona hafa ihany, vetivety aho dia naniry ny hilomano lalina ao anatin'ity vondrom-piarahamonina mahafinaritra ity. Tsy andriko araka izany ny hanoratra lahatsoratra iray tena avy amiko — amin'ny teny Anglisy mazava loatra, tsy misy tokony hataoko intsony afa-tsy ny mitady zavatra tsara hosoratana. Amin'ny fanaovana izany, afaka hanatsara ny fahaizako manoratra ny teny anglisy aho ary mampitombo bebe kokoa ny fandraisako anjara.
Mitolagaga mandrakariva aho mahita ireo olona izay mamokatra tsy tapaka sy amim-pahavitrihana asa soratra iray,. Mino aho fa izy ireny dia afaka tsara tokoa manao fikarohana mahafaoka be, manana fifehezantena sy kalitao mba hanasongadinana ireo fitaovana tsy manam-paharoa izay miparitaka manerana izao tontolo izao, ary tsy hanadino ny hamintina azy ireny anaty asa azo vakiana tsara.
Amin'ny andavanandro aho miasa amin'ny maha-mpikaroka mpanampy ao Jakarta, maminavina ny hanangana tetikasa sosialy miaraka amin'ireo namako ihany koa aho. Araka izany da takian'ny asa ny tsy maintsy hamakiako sy hanoratako, ary ny tiako hotenenina dia be dia be. Andrandrain'ny tarika misy anay ny hamokatra lahatsoratra iray hatramin'ny telo momba ny fikarohana, miainga avy aminà tetikasa tokana. Ny zavatra iainako eto dia raisiko ho toy ny fanazarana, fanampin'izay dia mahazo namana marobe vaovao aho.
Noho izany, isaorana ianareo!